लकडाउन ५४ औं दिन पुग्दा सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन ल्याउने तयारीमा ! – Everest Pati
लकडाउन ५४ औं दिन पुग्दा सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तन ल्याउने तयारीमा !
काठमाडौं – सरकारले देशमा जारी लकडाउनको मोडालिटी फेर्नेगरी छलफल अगाडी बढाएको छ । चैत ११ गतेबाट शुरु भएको लकडाउन ५४ औं दिन पुग्दा सरकारले यसको मोडालिटीमा परिवर्तन ल्याउने गरी छलफल गरेको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जेठ ५ गतेपछि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
त्यसैगरी समितिले अध्ययन वा अन्य कामको सिलसिलामा जापान र हङकङमा बस्दै आएका तर लकडाउनका कारण नेपालमै रहेका नागरिकहरुलाई चार्टड फ्लाइटमार्फत पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । सचिव विडारीले लकडाउनका कारण जापान जानबाट रोकिएका ६ सय र हङकङको आईडी प्राप्त नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण, अध्यागमन प्रक्रिया पूरा गरी पठाउने निर्णय भएको बताए ।
काठमाडौंमा ३१ जनामा देखियो कोरोना पोजेटिभ ! खतरा बढेपछि कोरोनासँग लड्न सेना सडकमा उत्रिने